> Resource > Windows > Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray ama la tirtiro Faylal ay ka Windows 8
U baahan tahay caawimo inuu ka soo kabsado Documents Business ka My Windows 8 Computer!
Hi, Waxaan iibsaday ah Windows 8 computer oo waxaan ka dhigtay qaar ka mid ah waraaqaha muhiimka ah ganacsatada ku sugan. Yesterday aan wiil yar tirtiray oo dhan oo iyaga ka mid. Waxaan meel walba hubiyaa oo ay ku jiraan recycle bin, laakiin waxba kama ay helin. Qof ii sheegi kartaa sida inuu ka soo kabsado documents aan?
Haa, waxaad u baahan tahay oo dhan waa uun Windows 8 Data Recovery software. Wondershare Data Recovery waa barnaamij soo kabashada xog ah oo awood aad ka bogsato lumay, la tirtiro ama xataa formatted files kombiyuutar, telefoonka gacanta, drive dibadda adag, kaarka SD iyo qalabka kale ee lagu kaydiyo. Weli wanaagsan, waxaa hadda si buuxda u la jaan qaada Windows 8. Sidaa daraadeed, waxaad si fudud u soo kaban karto xogta ka Windows 8 computer. Waxaad kala soo bixi kartaa version tijaabo ah Wondershare Data Recovery ah ka dibna qabtaan Windows 8 file kabashada in talaabooyin fudud qaar ka mid ah. Version maxkamad kuu oggolaanayaa in aad your computer hore iskaan si aad u hubiso in files marsiiyey by Wondershare Data Recovery waa waxa aad rabto inuu ka soo kabsado ama ma samayn karaan.
Waxaad version tijaabo ah oo xagga hoose ka heli kartaa:
Talaabooyinka inuu ka soo kabsado Faylal ay ka Windows 8 Computer
Tallaabada 1 Marka laga bilaabo barnaamijka, waxaad si toos ah hagi doona in Wizard Recovery Mode. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in guji "Next" si ay u bilaabaan dib u soo kabashada.
Fiiro Gaar ah: Waxa kale oo aad ka badalan karaa in "Mode Standard" by click "Mode Standard" ayaa salka ku jira. Hawlgalka ayaa hab caadiga ah waa wax yar oo kala duwan, laakiin sidoo kale waa mid aad u fudud.
Tallaabada 2 In tallaabadaas, waxaad u baahan tahay in ay go'aan ka gaarto waxa nooca file aad rabto in aad u soo kabsadaa interface ka. Haddii aad rabto in aad soo kabsado document files oo kaliya, waxaad dooran kartaa "Office Document". Haddii aad rabto in aad soo kabsado noocyo badan file, dooro "Dhammaan Noocyada File" ka dibna riix "Next" in ay sii wadaan.
Tallaabada 3 ka dib hubinta noocyada file, halkan aad doonaysid in aad xulan xijaab meesha aad rabto inuu ka soo kabsado files lumay ka. Waxa kale oo aad dooran kartaa "Desktop", "Recycle Bin" iyo "My Document". Guji "Next" in ay sii wadaan.
Fiiro Gaar ah: Waxa kale oo aad dooran kartaa qalabka ku xiran dibadda inuu ka soo kabsado files aad.
Tallaabada 4 Barnaamijku wuxuu haatan bilaabi doonaan in ay caga meesha aad ku badiyay faylasha aad iskaan. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in guji "Start" inaad raadiso faylasha aad laga badiyay.
Fiiro gaar ah: Waxaad sidoo kale riixi kartaa "Enable Deep Scan" si aad u hesho baaritaan dheer laakiin qoto dheer. Haddii aad rabto in aad soo kabsado files yahay kuwa lumaya waqti dheer ka hor, waxa kale oo aad isku dayi kartaa "ceeriin Recovery".
Talaabada 5 scan ka dib, dhammaan faylasha helo waa la qori doonaa qaybaha iyo sidoo kale waddooyinkii ay asal. Waxaad ku eegaan karo waraaqaha xafiiska ama sawiro iyo sidoo kale baaritaanka files magacyadooda asalka ah. Ka dibna waxaad u baahan tahay oo kaliya si aad u hubiso faylasha aad rabto in aad soo kabsadaan oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya, si aad u fayl deegaanka.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha mar badbaadin file ka soo kabsaday dib ay folder asalka ah. Plus, haddii aad tahay user Mac ah, waxa kale oo aad ka heli kartaa version Mac ee Wondershare Data Recovery ceshan files ka Mac aad.
Sida loo soo dejisan iyo rakibi Windows 10 on your computer